Goobaha Arctic | Wararka Safarka
Maria | | Ekotourism, General
Wareegga Arctic waa meesha ugu weyn ee bikradaha ku yaal meeraha. Waa dhul jiilaal weligiis waara in kasta oo cimiladu sii xumaato iyo bilo mugdi ah, haddana Arctic waxay leedahay nolol aad u wanaagsan. Qaar ka mid ah noolaha ugu xun ayaa meeshan ka dhigtay hoygooda,
Waa bad weyn oo ay ku hareeraysan yihiin cufnaan dhul ah oo lagu furay cidhiidhiyo yar yar oo ku xidha badda Baasifigga iyo Badweynta Atlantikaba. Biyahaas dhowr wadan sida Russia, Canada, United States, Denmark, Iceland, Sweden, Norway ama Finland ayaa is eegay waxaana kala saaraya baraf aad u fara badan oo biyaha dul sabeynaya.
Haddii aadan ka baqaynin qabowga oo Arctic Circle waa mid ka mid ah meelaha aanad wali u arkin inuu yahay socdaal khibrad leh, markaa waa inaad tagtaa Tromso, oo ah magaalada ugu weyn ee wareegga cirifka oo ku taal Norway. Nalalka Waqooyiga ayaa si fudud u sixran!
1 Ugaarsiga Nalalka Waqooyiga
2 Tromso waa dabeecad qaabkeeda ugu nadiifsan
3 Ku qoy dhaqankeeda hodanka ah
Ugaarsiga Nalalka Waqooyiga
Haddii aad jeceshahay ecotourism, malaha sababta ugu weyn ee aad u booqato Tromso waa inaad aragto Nalalka Waqooyiga ee caanka ah.
Waxay ku dhowdahay 70 ° woqooyi inta udhaxeysa fjords, jasiirado iyo buuraha dhaadheer, waa magaalada ugu muhiimsan waqooyiga wadanka waana magaalada labaad ee ugu dadka badan woqooyiga Arctic Circle kadib Murmansk ee Russia.
Marka loo fiiriyo meesha ay ku taallo, bartamaha Waqooyiga Nalalka Oval, waa meesha ugu fiican ee laga bilaabi karo tacabirkaaga wareegga Arctic, maaddaama Tromso ay jiraan fursado badan oo lagu arko Nalalka Waqooyiga, iyadoo aan loo eegin wareegyada qorraxda.
Caadi ahaan si loo arko nalalka woqooyi ee Arctic Circle, waxaa ugu wanaagsan in la maro wado aadda dhinaca hareeraha laakiin haddii cirku nadiif yahay, waxaa suurtagal ah in la arko laydhadhka woqooyi ee ka sarreeya magaalada lafteeda. Waxay kuxirantahay xaaladaha cimilada iyo dhaqdhaqaaqa qoraxda, ifafaale hawleedkan waxaa la arki karaa dhamaadka Ogosto ilaa Abriil.
Sidoo kale, qulqulka qulqulka awgood, Tromso waxay leedahay cimilo ka fudud marka loo eego meelaha kale ee taga isla isla loolka. Celcelis ahaan heerkulkeedu waa -4ºC xilliga qaboobaha laakiin haddii ujeeddadaadu tahay inaad aragto Nalalka Waqooyiga xusuusnow in heer-kulku u dhexeyn karo 5ºC iyo -25ºC sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad xirxirato si habboon.
Haddii aadan rabin inaad howshan kaligaa sameyso, bedel kale oo aad loogu taliyay oo ah inaad isku daydo inaad ka fikirto dhacdadan jawiga inta aad ku sugan tahay Tromso ayaa ah inaad gasho Safarrada Nalalka Waqooyiga oo leh hage. Waxaa jira shirkado badan oo kuu kaxayn doona meelaha araga ugu fiican tan iyo intaanad bixin ka hor ay eegaan saadaasha hawada oo isticmaalaan macluumaadkaas saxda ah si ay u go'aamiyaan halka ay aadayaan
Waa waayo-aragnimo dhammaystiran oo madadaalo leh tan iyo intii lagu jiray safarka baska, hagayaashu waxay u sheegaan khuraafaadyada qaarkood ee ku saabsan nalalka woqooyiga iyo sidoo kale sharraxaadda sayniska. Intaas waxaa sii dheer, hal mar meesha aada araga, waxay ka caawiyaan safrayaasha inay jaangooyaan kaamerada si ay u helaan sawirada ugu fiican waxayna siiyaan tilmaamo gaar ah oo ku saabsan sida loo sawiro si loo gaaro natiijada ugu cajiibka badan. Sidoo kale, marka dalxiisku dhammaado, waxay u fidiyaan dadka socotada ah shukulaato kulul iyo buskud kuwaas oo gacan ka geysanaya diirimaadka jirka.
Tromso waa dabeecad qaabkeeda ugu nadiifsan
Tromso waxay ku taal bartamaha dabeecadda dabiiciga ah ee ku xeeran buuro iyo fjords. Xaqiiqdii, waxay aad ugu dhowyihiin bartamaha magaalada oo xitaa laga arki karaa wadada weyn.
Qaab wanaagsan oo lagu baran karo muuqaalka ku hareeraysan magaaladan waa in la isku daro waayo-aragnimada aragtida Nalalka Waqooyiga iyo kuwa lagu arko gorgorrada badda iyo xirmooyinka kaliya 30 illaa 45 daqiiqo oo baabuur ah oo ka socda bartamaha. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad raacdo gaari xamuul ah oo ay jiidaan xayawaanku. Markii hore waxay ahayd waddo gaadiid aad u caadi ah maxaa yeelay xayawaanku waa xayawaan aad u xoog badan oo awood u leh inay jiidaan xawaaraha sare ee barafka iyo barafka.
Waa safar aad loogu taliyay in lagu sameeyo qaybtan ka mid ah Arctic Circle maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad dareento xiriirka ka dhexeeya ninka iyo eyga jawi adag sida kan oo kale. Shirkado badan oo maxalli ah ayaa bixiya dalxiiskan iyadoo loo eegayo baahiyaha socdaalka iyo khibrada ay doonayaan inay ku noolaadaan. Sledding iyo daryeelka huskies shaqsiyan waa khibrad lama ilaawaan ah.
Ku qoy dhaqankeeda hodanka ah
Markaad dhamaysid sahaminta dabeecadda qaybtan ka mid ah Goobaha Arctic, waxa ku xiga waa in lagu qooyo dhaqanka magaaladan.
Dhinac waxaad ku ogaan kartaa kaniisadaha kala duwan ee Tromso. Sawirka ugu badan waa kaniisada Tromsdalen oo loogu talagalay qaabdhismeedkeeda gaarka ah. Waxaa loo yaqaana Kaniisadda Tromso laakiin runtu waxay tahay inay tahay oo keliya kaniisad uu dhistay naqshadeeyaha Jan Inge Hovig. Qaab dhismeedka Ahraamta ah waa mid aan laqiyaasi karin oo aragtiyo badan ayaa ku wareegaya macnaheeda. Qaarkood waxay yiraahdaan waxay u egtahay baraf baraf ah qaarna waxay la mid yihiin jasiiradda Haja.
In kasta oo loo yaqaan 'cathedral', haddana dhab ahaantii waxaa jira laba cathedral oo kala duwan oo ku yaal Tromso: Protestant (qaab neo-Gothic ah oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad) iyo Kaatooligga (waqooyiga adduunka ugu sarreeya), oo labaduba laga sameeyay alwaax.
Dhinaca kale, booqashada Matxafka Polar waxaad wax badan ka baran kartaa taariikhda sahaminta Arctic. Waxay bilaabmaysaa 1830 gudihiisana waxaa jira qaybo loo qoondeeyay in lagu shaabadeeyo ugaarsiga, nolosha dabinleyda waqooyiga dalka, sahamiyaha Amundsen, iwm.
Meel kale oo ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan Tromso oo u dhow Matxafka Polar si aad fikrad uga hesho sida noloshu ahaan jirtay halkan waagii hore waa Skansen, waa guriga ugu da'da weyn magaalada. Waxaa loo dhisay xarun kastam 1789 waxaana ku wareegsan guryo yaryar oo duug ah oo la dhisay qarnigii XNUMXaad iyo beer qurux badan.
In kasta oo qabowgu jiro, magaaladani waxay leedahay nolol dhaqameed hodan ah iyo dhacdooyin badan oo xusid mudan sida Toddobaadkii Saami, Maraalkii Badhkii Habeenkii Polar, Tromso International Film Festival ama Aurora Borealis Festival ayaa la qabtaa xilliga qaboobaha. Dhacdooyinka kale ee caanka ah ee lala yeesho dadka soo booqda waxaa ka mid ah riwaayaddii Sannadka Cusub iyo Riwaayadihii Nalalka Waqooyiga oo lagu qabtay Cathedral Arctic. Ha moogaanin iyaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Goobaha Arctic